Annaga nagu saabsan - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. waxay ku taal Dongguan China, oo leh aag dhan 5000 m², shirkad adeeg ku wajahan oo ku takhasustay alaabada R&D caag iyo alaabada silikoon.Inta badan ku hawlan noocyada kala duwan ee alaabta ku lug leh qaybaha korontada, qaybaha elektarooniga ah, qaybaha telefoonka gacanta, qaybaha baabuurta, qalabka caafimaadka, qalabka jikada iyo alaabta carruurta, iyo warshado kale.
Waxaan leenahay naqshad wax soo saar xoog leh iyo kooxda naqshadeynta caaryada, waxay si dhakhso ah u horumarin karaan oo u naqshadeyn karaan caaryada tayada sare leh, waxaanan leenahay gurigayaga qalabaynta iyo mashiinka wax soo saarka silikoon, waxay soo saari karaan alaab tayo sare leh iyo tiro badan wakhtiga ugu gaaban.Waxaan ka samayn karnaa badeecada fikrad, waxaana ku bixin karnaa adeegyo laga soo bilaabo naqshadaynta alaabta, naqshadaynta caaryada, wax-soo-saarka alaabta, isu-ururinta alaabta, xidhidhaynta iwm.
Shirkaddu waxay si adag u fulisaa xakamaynta wax soo saarka iyo xakamaynta hababka wax soo saarka ee kala duwan iyadoo la raacayo shuruudaha nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO.Shirkaddu waxay leedahay nidaam maareyn dhamaystiran oo laga soo bilaabo naqshadeynta alaabta, cilmi baarista iyo horumarinta, horumarinta caaryada, alaabta ceeriin, tignoolajiyada wax soo saarka, hagaajinta tayada hababka wax soo saarka, tas-hiilaadka qalabka oo dhameystiran, xasilloonida tayada.Ka dib sanado badan oo horumar ah, alaabta shirkadu waxaa lagu iibiyaa dhammaan Shiinaha.Soosaarayaasha caanka ah ayaa si qoto dheer loo aaminay, waxaana loo dhoofiyaa Mareykanka, Midowga Yurub, Koonfur Bari Aasiya iyo wadamo kale waxayna ku guuleysteen ammaanta macaamiisha.
Waxaan aqbalnaa OEM ama ODM, waxaanan bixinaa taageero farsamo iyo adeeg aamin ah, hoos waxaa ah awoodeena ugu weyn.
1. Naqshadaynta alaabta iyo muunad degdeg ah.
2. Naqshadaynta caaryada iyo samaynta caaryada.
3. Xulashada agabka iyo horumarinta.
4. Silikoon iyo caag ka samaysan qaabaynta iyo qaabaynta cirbadeynta.
5. Shirarka alaabta.
6. Taageerada baakadaha gaarka ah.
Daacadnimo, halbeeg, hal-abuurnimo, mahadnaq.
Hawlgalka caadiga ah, diiradda xirfadeed, hal-abuurnimo, tayada marka hore.
Ku wanaaji suuqa oo leh karti, ku horumari suuqa tignoolajiyada, kuna guulaysta macaamiisha tayo leh.
Alaabooyin Tayo Sare leh + Qiimayaal Tartan leh + Wakhtiga Wareega Degdega ah + Adeegga Macmiil ee Wanaagsan
Haysashada tignoolajiyada wax soo saarka ee hogaaminaya, shaqaale khibrad sare leh, waxay yeelan karaan xakameyn aad u wanaagsan oo ku saabsan qiimaha wax soo saarka.
Hadafkayagu waa inaanu soo saarno alaab tayo wanaagsan leh, anagoo hubinayna in macaamiisheena ay nala wadaagi doonaan khibradooda wanaagsan oo ay nala shaqayn doonaan.Shahaado gaar ah: SGS, FDA, RoHs ayaa diyaar ah.
WAQTIGA ISKU-BEDDELKA DEGDEGGA AH
Wax soo saarkeena hufan ee la warshadeeyay, oo lagu daray dabacsanaanta shaqaalaha, ayaa hoos u dhigtay soo-jeedinta wax-soo-saarka, iyada oo la hubinayo in keenistadu tahay waqtigii loogu talagalay.Waxaan ku darnaa helitaankayaga toosan ee wax soo saarka, fududaynta habka dalbashada.
Dhagaysi wanaagsan oo macaamiisheena caanka ah ee ku saabsan jawaab celintooda iyo faallooyinkooda iyo sidoo kale su'aalaha macaamiisheena cusub ayaa noo suurtageliyay inaan si wanaagsan ula qabsano oo aan wanaajino tayada adeegga.Sidaa darteed, waxaan si fiican u dabooli karnaa baahida macaamiisheena.
Ku soo dhawoow inaad si shakhsi ah u booqato warshadeena, u soo dir su'aalahaaga iimaylkayaga, ama na soo wac wakhti kasta!Waad ku mahadsan tahay dareenkaaga, taageeradaada, kalsoonidaada iyo iskaashigaaga.